2 Samuel 12 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
12 Ɛnna Yehowa somaa Natan+ kɔɔ Dawid nkyɛn. Na ɔkɔɔ ne nkyɛn+ kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mmarima baanu tenaa kurow bi mu, obiako yɛ ɔdefo, na obiako yɛ ohiani. 2 Ná ɔdefo no wɔ nguan ne anantwi bebree pa,+ 3 na ohiani no de, onni hwee sɛ oguammere ketewa biako a ɔtɔɔ+ no. Ɔyɛn no, na ɔne no ne ne mma boom nyinii. Odii n’aduan bi, na ɔnom ne kuruwa ano. Ɔdaa ne kokom, na ɔbɛyɛe sɛ ne babea. 4 Afei ɔhɔho bi baa ɔdefo no nkyɛn, nanso wampɛ sɛ ɔde ne nguan ne n’anantwi no bi yɛ ɔkwantuni a waba ne nkyɛn no hɔho, na ɔkɔfaa ohiani no guammere no siesie maa ɔbarima a ɔbaa ne nkyɛn no.”+ 5 Ɛnna Dawid bo fuw ɔbarima no denneennen,+ na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi,+ ɔbarima a ɔyɛɛ saa no fata owu!+ 6 Sɛ́ wayɛ saa ade yi na wanhu mmɔbɔ+ nti, oguan no, ɔnhyɛ ananmu+ mpɛn anan.”+ 7 Ɛnna Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Wo ara wone ɔbarima no! Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Me na mesraa+ wo de wo sii Israel so hene, na me na migyee+ wo fii Saul nsam. 8 Mede wo wura fie+ maa wo, na mede wo wura yerenom+ nso guu wo kokom, na mede Israel ne Yuda fie maa wo.+ Sɛ esua a, anka mede nneɛma yi ne nneɛma foforo bɛka wo ho.+ 9 Dɛn nti na woabu Yehowa asɛm animtiaa na woayɛ n’ani so bɔne+ yi? Wode nkrante akum Hitini Uria,+ na woafa ne yere aware no;+ Ammonfo nkrante na wode kum no. 10 Na afei nkrante+ remfi wo fie da,+ efisɛ woabu me animtiaa na woafa Hitini Uria yere aware no.’ 11 Nea Yehowa aka ni, ‘Hwɛ, mɛma mmusu asɔre wo fie aba wo so,+ na magye wo yerenom w’anim de wɔn ama wo yɔnko,+ na ɔne wo yerenom adeda awia ketee.+ 12 Wo de, woyɛɛ no ahintawee mu,+ na me de, mɛyɛ eyi awia ketee+ wɔ Israel nyinaa anim.’”+ 13 Ɛnna Dawid ka+ kyerɛɛ Natan sɛ: “Mayɛ Yehowa bɔne.”+ Na Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Yehowa nso de wo bɔne akyɛ wo.+ Worenwu.+ 14 Nanso esiane sɛ woayɛ eyi de abu Yehowa animtiaa+ nti, ɔba a wɔawo no ama wo seesei no, obewu.”+ 15 Ɛnna Natan siim kɔɔ ne fie. Na Yehowa kaa+ abofra a Uria yere wo maa Dawid no ma ɔyaree. 16 Na Dawid srɛɛ nokware Nyankopɔn no maa abofra no, na Dawid dii mmuada,+ na ɔkɔɔ mu kɔdaa fam+ anadwo no. 17 Na ne fie mpanyimfo kogyinaa ne nkyɛn sɛ wɔrema no so afi fam, nanso wampene, na ɔne wɔn annidi+ nso. 18 Ɛbae sɛ da a ɛto so ason no, abofra no wui. Nso na Dawid nkoa no suro sɛ wɔbɛka akyerɛ no sɛ abofra no awu, na wɔkae sɛ: “Bere a abofra no te ase no, yɛne no kasae nanso wantie yɛn. Ɛnde yɛbɛyɛ dɛn aka akyerɛ no sɛ, ‘Abofra no awu’? Ɔbɛyɛ adebɔne bi.” 19 Bere a Dawid hui sɛ ne nkoa reyɛ huhuhuhu no, Dawid hui sɛ abofra no awu. Enti Dawid bisaa ne nkoa no sɛ: “Abofra no awu anaa?” Na wobuae sɛ: “Wawu.” 20 Ɛnna Dawid sɔre fii fam, na oguare de ngo srae,+ na ɔsesãã n’atade kɔɔ Yehowa fie+ hɔ kɔkotowee.+ Ɛno akyi no, ɔbaa ne fie, na obisa ma wɔde aduan besii n’anim ntɛm, na odii. 21 Ɛnna ne nkoa no bisaa no sɛ: “Ade a woayɛ yi kyerɛ dɛn? Abofra no te ase no, ne nti, wudii mmuada na wusui. Nanso abofra no wui ara pɛ, woasɔre adidi.” 22 Na ɔkae sɛ: “Abofra no te ase no, midii mmuada,+ na misui+ efisɛ mekae sɛ, ‘Hena na onim sɛ ebia Yehowa bɛdom me na abofra no anya nkwa?’+ 23 Seesei a wawu yi, meredi mmuada ayɛ dɛn? Metumi de no aba bio anaa?+ Mɛkɔ ne nkyɛn,+ na ɔno de, ɔrensan mma me nkyɛn.”+ 24 Na Dawid kyekyee ne yere Bat-Seba+ werɛ. Afei ɔkɔɔ ne nkyɛn ne no kɔdae, na ɔwoo ɔbabarima.+ Ɔtoo no din Solomon,+ na Yehowa dɔɔ no.+ 25 Na ɔsomaa odiyifo Natan+ ma ɔkɔtoo ne din Yedidia,* Yehowa nti. 26 Na Yoab+ ne Ammonfo a wɔwɔ Raba+ koe, na ogyee ahenkurow no. 27 Ɛnna Yoab somaa abɔfo baa Dawid nkyɛn bɛkae sɛ: “Me ne Raba ako,+ na magye nsu kurow no. 28 Na afei boaboa ɔman no nkae ano bɛbɔ kurow no ho nsra, na gye, na m’ankasa mannye kurow no, na wɔamfa me din anto so.” 29 Na Dawid boaboaa ɔman no nyinaa ano na ɔne Raba kɔkoe na ogyei. 30 Na oyii Malkam abotiri fii ne ti;+ ná emu duru yɛ sika dwetikɛse biako, na aboɔden abo nso wom, na wɔde hyɛɛ Dawid ti. Ɔde kurow no mu asade+ bebree pa bae. 31 Ɔde emu nnipa nso bae, na ɔma wɔde nnade a ano yɛ nnam ne akuma paee abo,+ na ɔma wɔyɛɛ birikisi; saa na ɔyɛɛ Ammonfo nkurow nyinaa. Ɛnna Dawid ne dɔm no nyinaa san baa Yerusalem.
^ Ase ne, “Yah dɔfo.”